Ibali le-Creepiest Urban kwiLizwe ngalinye lama-50 kwiCandelo 10
Ikhaya Iindaba ezothusayo zoLonwabo Ibali le-Creepiest Urban kwiLizwe ngalinye lama-50 kwiCandelo 10
Iindaba ezothusayo zoLonwaboEngaqhelekanga kwaye engaqhelekanga
ibhalwe ngu Waylon Jordan January 18, 2021
Ngaba sele sifikelele esiphelweni sohambo lwethu lwedolophu nge-US?! Ndicinga ukuba sinayo. Phantse kunzima ukuyikholelwa, kodwa apha sikula mazwe mahlanu okugqibela kuhambo lwethu olothusayo kwaye ndiyathemba ukuba ukonwabele ukuzifunda kangangoko ndinokubhala ngazo.
Ngoku, ngenxa yokuba sisiqendu sokugqibela kolu hambo, ungalahli ithemba! Ezi zintlanu zokugqibela zilungile njengokuqala, kwaye ngelixa siphumile, ngekhe wazi apho sinokuya khona ngokulandelayo!
Yeyiphi intsomi oyithandayo yedolophu ngalo lonke ixesha? Sazise kumagqabantshintshi!
Ifoto nge Flickr
Ndilinde ixesha elide ukufika eVirginia ukuze ndikwazi ukuthetha ngeBunnyman. Ibali liyandonwabisa kakhulu. Yintsomi eyinyani yasezidolophini, eyazalwa kwiziganeko ezibini ngo-1970, ethe yathatha ubomi bayo yababalisa amabali, abenzi beefilimu, amagcisa neemvumi ngokufanayo.
Yilapho yaqala khona eBurke, eVirginia:
Nge-19 ka-Okthobha u-1970, i-Cadet ye-Air Force Academy uRobert Bennett kunye nomlingane wakhe babehleli emotweni emileyo xa indoda eyayinxibe isuti emhlophe ye-bunny yaphuma ibaleka emithini ibambe umnqwazi kubabini. ndinenombolo yethegi yakho! ”
Le ndoda yaqhubeka yaphosa i-hatchet emotweni, eyaphuka ngefestile yaza yawela ebhodini njengoko uBennett egxadazela ukuqhuba. Indoda yakhala njengoko yayibaleka ngaphambi kokuba itsiba ibuyele ehlathini.
Kwiintsuku ezilishumi kamva ngo-Okthobha wama-29, uPaul Phillips, unogada wokwakha, wafumanisa indoda enesuti emhlophe, emnyama nomhlophe. UPhillips ujonge ngcono umhlaseli, emchaza malunga neminyaka engama-20 ubudala, u-5'8 ″ kunye ne-chubby kancinci. Le ndoda yaqala ukujija izembe evarandeni ikhwaza isithi, “Uyangena. Ukuba uthe wasondela, ndiza kukunqumla intloko. ”
Amapolisa aseFairfax County avule uphando ngeziganeko, zombini ezigqityiweyo zavalwa ngenxa yokungabikho kobungqina.
Kwakwanele ukubangela ukuba abantu bendawo bacinge, nangona kunjalo.
Yintoni eyenzekayo emva koko yimbali yedolophu yegolide. Kungekudala amabali aqala ukukhula malunga noBunnyman ongaqondakaliyo kunye nemvelaphi yakhe kunye neenjongo zakhe.
Elinye ibali elinje libuyela emva phaya ngo-1904 xa abaguli ababini ababalekayo babalekela ehlathini kufutshane nale ndawo. Kungekudala abahlali bafumanisa izidumbu zomvundla ezinolusu, ezinesiqingatha. Ekugqibeleni, omnye wabo wafunyanwa exhonywe kwi-Fairfax Station Bridge kunye ne-crude, eyenziwe ngesandla ngesigqoko kunye nabasemagunyeni bacinga ukuba iziganeko ezingaqhelekanga ziphelile. Nangona kunjalo, njengoko imizimba yemivundla emininzi ifunyenwe, kwacaca ngokukhawuleza ukuba omnye umntu obalekileyo wayesekhona.
Ngoku, bathi, uBunnyman usayikhathaza le ndawo, egrogrisa abahlali kwaye ejinga amaxhoba akhe kwibhulorho efanayo neHalloween. Ewe kunjalo, akukho bungqina boku okhe wafunyanwa, kodwa loo nto ayibathinteli abazali ekulumkiseni abantwana babo ukuba balumke ngeHalloween hleze babe lixhoba likaBunnyman.
Le yinguqulelo nje enye yamabali athe avela kummangaliso, kwaye kumnandi kum ukuba konke kubonakala ngathi kukhule kwiziganeko ezibini ngeminyaka yoo-1970 yindoda eyayibonakala ikhathazekile ngokwakhiwa kweedolophu ezisezidolophini. kwindawo.
Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi malunga noBunnyman, ndincoma inqaku likaJenny Cutler Lopez elithi "Phila ixesha elide ngeBunnyman" Imagazini yaseNyakatho Virginia ukusuka ngo-2015. Iyagubungela izehlo zokuqala kodwa iphinde iye kwindlela ekhule ngayo malunga ne-Bunnyman.
IWashington: Amehlo aKhanyayo kwiSikolo samaBanga aPhakamileyo saseMariner
umfanekiso nge yhiae ahmad ku pixabay
Isikolo samabanga aphakamileyo iMariner e-Everett, eWashington sifana nesinye isikolo esiphakamileyo kweli lizwe ngaphandle kwenkcaza nje enye. Ngelixa ezinye zezibane zesikolo zishiywe ubusuku bonke njengazo naziphi na ezinye, ngobusuku obuthile ezinzulwini zobusuku, izibane ziya kucima zenze ubumnyama.
Xa oku kusenzeka, abanye bendawo bathi, ungabona ngamehlo amenyezelayo ekhanya ebumnyameni besikolo. Ngaphezu koko, bathi ukuba ujonga amehlo ixesha elide ngokwaneleyo, uya kuqala ukubona inani lendoda enamaphiko ngaphakathi esikolweni.
Ngaba le yinto engafanelekanga, yemascot engaphezu kwendalo? Ngaba umntakwabo Mothman omncinci uye kwiiklasi zasebusuku? Akukho mntu uqinisekileyo, kodwa bathi ungaziva ukuba amehlo akujongile ngaphambi kokuba uwabone, kwaye ukuba yenza ukuba ibe luhlobo oluchanekileyo loluhlu.
I-West Virginia: aBafundi abangenantloko baseMonalia County
Eli bali lasezidolophini lelinye elatsala ubomi kwityala elibi nelinyanisekileyo lokubulala ngoJanuwari, 1970. Abaququzeleli ababini, uMared Malerik noKaren Ferrell, babezama ukukhwela ihashe emva kokushiya imovie ngorhatya lwangoJanuwari. Abazange baphinde babonwe de imizimba yabo enqunyulweyo yafunyanwa ehlathini kwiinyanga kamva.
Abantu balapho boyikiswa yile meko, kwaye emva kweminyaka emihlanu ayizange isonjululwe de indoda egama linguEugene Clawson yavuma ukubulala. Nantsi into, nangona. Ngelixa uClawson ngokungathandabuzekiyo wayengumntu ombi – waye wafunyanwa enetyala lokudlwengula intombazana eneminyaka eli-14 ubudala- uninzi lwabantu aluzange lucinge ukuba enetyala lokubulala abo basetyhini babini kuthethwa ngabo.
Ityala liye laba ngumxholo weepodcasts, uphando kunye neencwadi okoko wabanjwa uClawson kwaye wagwetywa, kwaye phantse akukho mntu ucinga ukuba ulenzile eli tyala.
Ke ngubani owenza? Kuwo wonke umphandi, kukho umntu okrokrelwayo owahlukileyo, kwaye kunzima ukutsho.
Into esiyaziyo kukuba ukusukela ngelo xesha, amarhe kunye neengxelo zokubonwa kwabafazi ababini abangenantloko ziye zakhula ecaleni kwendlela apho uMared noKaren bagqibela ukubonwa khona. Ngapha koko, ngaphezulu kwengozi yemoto enye ibekiwe kwizityholo eziphazamisa abaqhubi beemoto.
Ngaba le mimoya iyaliphinda ixesha layo lokugqibela okanye ilivo lasezidolophini elithwele intlekele ukulumkisa abantu abancinci ngobungozi bokukhwela ihitch?
IWisconsin: I-Phantom yeRidgeway aka The Ridgeway Ghost
umfanekiso nge lea ithemba bonzer ku pixabay
Indlela eyedwa yodwa kufutshane naseDodgeville, eWisconsin likhaya eliyinto eyoyikisayo ekucingelwa ukuba yayingumoya odityanisiweyo wabazalwana ababini abasweleka kwimbambano yentsimbi ngeminyaka yoo-1840.
Ukusukela ngelo xesha, ekucingelwa ukuba kwimijikelezo yeminyaka engama-40, iphantom ibuya. Yintoni eyona inqabileyo malunga neli dolophu yasezidolophini, nangona kunjalo, yimeko yokutshintsha kwemilo yomoya. Ngamaxesha ohlukeneyo, iRidgeway Ghost ibonwe njengezilwanyana ezinjengezinja kunye neehagu kunye nokuthatha imo yamadoda nabafazi kwaneebhola ezinkulu zomlilo. Ingxelo enye ubuncinci ide ibandakanye umkhweli wehashe ongenentloko.
Abanye balapha babiza umbono we-phantom ngomsebenzi wee pranksters, kodwa abo banamava okuqala kwesandla baya kukuxelela ngenye indlela.
Ukuza eWyoming: Inqanawa yokufa kuMlambo iPlatte eseMantla
umfanekiso nge Enzeli ku pixabay
Ndingumfunxeli we inqanawa elungileyo ibali…
Ukusukela ngeminyaka yoo-1860, inqanawa eyimfihlakalo yamaphantom yaxelwa kuMlambo iNorth Platte eWyoming. Kubonakala kwibhanki yenkungu phakathi emini – xa ezo zinto zihlala zingenakubakho- kwaye ziyavela ezithunzini, zigutyungelwe yingqele kunye nabasebenzi abanesiporho.
Eyona nto yoyikisayo ngale nqanawa kukuba kuthiwa iyavela ngaphambi nje kokuba umntu asweleke. Ngapha koko, bathi uyakubona ukubonakala komntu omiselwe ukuba asweleke kumgangatho wenqanawa, egutyungelwe yiqabaka njengabanye abasebenzi.
Kukho amabali amaninzi malunga noMkhumbi woKufa, kodwa ndiza kwabelana ngale kuphela erekhodwe kuRhulumente wakho kuphela:
Ngaphezulu kweminyaka eli-100 eyadlulayo, umlobi ogama linguLeon Webber uxele ngokudibana kwakhe nenqanawa yemiboniso. Ekuqaleni, konke akubonayo yayiyibhola enkulu yenkungu. Ubalekele emaphethelweni omlambo ukuze ajonge ngakumbi kwaye waphosa ilitye kubunzima obujikelezayo. Kwangoko yathatha uhlobo lwenqanawa yokuhamba ngenqanawa, imasti yayo kunye neeseyile ezigqunywe ngesilivere, iqabaka elibengezelayo.
UWebber wayenokubona oomatiloshe abaliqela, nabo begqunywe yiqabaka, bexinene kwinto ethile elele kumgangatho wenqanawa. Xa bemkayo bemnika umbono ocacileyo, wothuswa kukubona ukuba sisidumbu sentombazana leyo babejonge kuyo. Ukujonga kufutshane, umbambisi wamqonda njengeqabane lakhe. Khawufane ucinge ukothuka kwakhe xa ebuyela ekhaya kwinyanga kamva esakuva ukuba intanda yakhe ifile ngala mhla wabona imbonakalo eyoyikisayo.
Ngamanye ala mabali avela, COFA APHA.
Kulungile… nantso ke. Sigubungele intsomi yam endiyithandayo edolophini evela kumazwe angama-50 ase-US Ngaba unayo into oyithandayo? Ngaba bakho abanye obuya kukhetha? Sazise ukuba ucinga ntoni ngezantsi!
Idolophu yaseDolophiniIimbali zeDolophuVirginiaWashingtonWaylon JordanWest VirginiawisconsinWyoming
I-trailer eNtsha "ye-Dreamcatcher" Ngaba yi-Stab ebumnyameni
Ukumangaliswa 'koMfokazi' Ukuhlekisa sele kujongeka kumnandi